Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny spectrum mitohy sy ny tsipika mamirapiratra | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny spectrum mitohy sy ny tsipika mamirapiratra | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Hafa / Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny spectrum mitohy sy ny fikajiana tsipika mamirapiratra
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny spectrum mitohy sy ny spectrum tsipika mamirapiratra dia ny tsy fisian'ny tsipika madiodio ao anaty spectrum mitohy fa misy tsipika misaraka amin'ny spektrum mazava.
Ny fikajiana mitohy dia andian-danja azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana, tsy manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda tsirairay. Ny spectrum tsipika mazava dia andiana soatoavina azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda.
2. Inona no atao hoe Spectrum mitohy
3. Inona no atao hoe Spectrum mamirapiratra
4. Spectrum mitohy vs Bright Line Spectrum amin'ny endrika Tabular
5. Famintinana - Spectrum mitohy vs Bright Line Spectrum
Inona no atao hoe Spectrum mitohy?
Ny fikajiana mitohy dia andian-danja azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana, tsy manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda tsirairay. Ity andiany sanda ity dia ny mifanohitra amin'ny spectre spectrum . Ny soatoavina nalaina hananganana spectrum mitohy dia mety ho angovo, lava-lava , sns.
Ny ohatra mahazatra indrindra amin'ny spectrum mitohy dia ny spectrum ny hazavana avoakan'ny atôniôma hydrôniô mientam-po. Ity spectrum ity dia noforonina noho ny elektrôna maimaim-poana, izay nanjary voafatotry ny ion hidrôzenina ary mamoaka fotone izay mirona hiparitaka moramora amin'ny halavan'ny halavan'ny halavany.
Sary 01: Ohatra amin'ny spectra mitohy eo amin'ny faritra hita maso
Ny teny hoe spektrum mitohy dia matetika ampiasaina raha ny isan'ireo sanda ho an'ny habetsaky ny vatana (angovo na halavan'ny halavany) dia misy faritra mitohy sy misaraka, na amin'ny fotoana iray na amin'ny fotoana samy hafa. Izany dia satria ny toerany sy ny tanjaky ny sombintsombiny maimaim-poana dia manana spectrum mitohy, ary rehefa voafatotra amin'ny habaka voafetra ilay sombiny, dia lasa spektrum tsy mitovy. Amin'ny ankapobeny, ny rafitra simika kinika dia ampifandraisina amin'ny vongan-tsolika (ohatra ny ataoma ao anaty gazy, ny elektrôna ao amin'ny andry elektrôna, ny elektrôna tariby mitondra vy amin'ny vy, sns.).
Inona ny Bright Line Spectrum?
Ny spectrum tsipika mazava dia andiana soatoavina azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda. Ity karazana spektrum ity dia fantatra ihany koa ho toy ny fitrandrahana entona fandefasana, izay amboarina amina lamina manokana ny tsipika mamirapiratra azo amin'ny fanandramana.
Sary 02: Spectrum of iron
Ny spectrum tsipika mamirapiratra dia noforonina rehefa misy jiro jiro mandalo santionany analyte izay ny halavan'ny jiro dia entin'ny atôma ao amin'ilay santionany; noho izany, ny elektrôna ao amin'ireo atoma ireo dia tonga amin'ny fanjakana mientanentana. Satria tsy maharitra ho an'ny atôma ny mipetraka ao anaty fanjakana mientanentana, dia miverina amin'ny tany ny elektrôna ary manome fotone satria EMR manana angovo izay mitovy amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny tany sy ny fanjakana mientanentan'ireo elektrôna ireo. Ireo fotone nalefa ireo dia tsikaritra ho toy ny tsipika fahazavana miloko ao ambadika mainty, mamorona tsipiky ny tsipika.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny spectrum mitohy sy ny fikajiana tsipika mamirapiratra?
Ny fikajiana mitohy dia andian-danja azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana, tsy manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda tsirairay. Etsy ankilany ny fikajiana tsipika mamirapiratra dia andiana soatoavina azo trandrahana isa ara-batana manana elanelana be eo anelanelan'ny soatoavina. Noho izany, ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny spectrum mitohy sy ny spectrum tsipika mamirapiratra dia ny tsy fisian'ny tsipika madiodio ao anaty spectrum mitohy, fa kosa misy tsipika misaraka amin'ny spektrum mazava.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny spectrum mitohy sy ny spectrum tsipika mamirapiratra amin'ny endrika tabular.
Famintinana - Spectrum mitohy vs Bright Line Spectrum
Ny fikajiana mitohy dia andian-danja azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana, tsy manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda tsirairay. Ny spectrum tsipika mazava dia andiana soatoavina azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda. Noho izany, ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny spectrum mitohy sy ny spectrum tsipika mamirapiratra dia ny tsy fisian'ny tsipika madiodio ao anaty spectrum mitohy, fa kosa misy tsipika misaraka amin'ny spektrum mazava.
1. “ Astronomia .” Lumen.
1. “ Fampisehoana mitohy ” Nosoratan'i Sharon Bewick (CC BY-SA 3.0) avy amin'ny Wikimedia Wikimedia
2. “ Emission spectrum-Fe ” Nosoratan'i Nilda - Asa manokana (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Android CyanogenMod 6 sy CyanogenMod 7 Fahasamihafana eo amin'ny Synthesis asymmetric ampahany sy tanteraka Fahasamihafana eo amin'ny Retinopathie Proliferative sy Nonproliferative Fahasamihafana eo amin'ny Cohesin sy ny Condensin Fahasamihafana eo amin'i Thallophyta sy Pteridophyta
Fahasamihafana eo amin'ny catenation sy ny tetravalency
Fahasamihafana eo amin'ny Sony PlayStation 3 sy PlayStation 4 (PS3 vs PS4)
Fahasamihafana eo amin'ny Assembler sy ny mpandika teny
Fahasamihafana eo amin'ny fizotry ny efitrano sy ny fizotran'ny fifandraisana
Fahasamihafana eo amin'ny fampifanarahana seza sy sambo